The Himalayas: njirimara, otu esi kpụọ ya, flora na fauna | Network Meteorology
Mgbe ị na-ekwu maka oke ugwu di n ’uwa, you na ekwu maka ya ndị himalayas. Ọ bụ ugwu ugwu nke nwere onwe ya ugwu kachasị elu dị na mbara ụwa anyị, gụnyere Everest na K2 a ma ama. O nwekwara otutu glaciers nwere ugwu banyere obibi. Ọ bụ ezie na ọ buru oke ibu, a na-ahụta ya dịka otu n'ime usoro usoro ọdụdụ ugwu kacha nta n'ụwa anyị.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka njirimara niile, geology, flora na fauna nke dị na Himalaya yana mkpa ọ nwere maka okike. You chọrọ ịmatakwu banyere ugwu ndị kacha ewu ewu na ụwa? Gaa n'ihu na-agụ n'ihi na ị ga-amụta ihe niile 🙂
3 Olee otú e si kee ugwu ugwu Himalaya?
4 Osisi na osisi nke Himalayan
A na-ahụ Himalayas n'akụkụ ebe ndịda-etiti Eshia. Ugwu a na-eme ka ụfọdụ usoro dị egwu dị egwu n’ụwa. Ọ na-aga ebe dị anya nke nwere mba 5 nke ndọtị: India, Nepal, China, Bhutan na Pakistan. N'ihi ihu igwe na ịdị elu nke ugwu ya enwere nnukwu ebe nchekwa ice na-eme ka ọ bụrụ atọ na ogo ụwa. Antarctica na Arctic bụ naanị ihe gafere ugwu ndị a karịa ice. Ọ bụ ezie na ọ naghị abanye n’elu ice ndị kasị elu n’ụwa, ọ na-apụta ìhè n’ihi mma ya na-enweghị atụ Ugwu Appalachian.
N’agbanyeghi n’ugwu a nwere ezigbo oyi, otutu obodo na obodo di iche-iche ebiela n’oge. Omenala ndị na-eto n’ebe ndị a pụrụ iche, ebe ọ bụ na e nweghị ebe ọzọ. Na mgbakwunye na ọdịbendị pụrụ iche na ọpụrụiche na ihu igwe oyi, ọ nwere nnukwu mmasị ndị njem, ọ bụghị naanị site na ndị ọbịa si mba ndị ọzọ, kamakwa site na ndị ọkachamara na-agba mbọ ịrịgo elu iji mebie ndekọ ụwa.
A maara ndị bi ebe a dị ka Sherpas na ndị kasị ọkachamara n'ugwu Nepal. N'ezie, ọtụtụ ndị raara onwe ha nye ịkụziri ndị novice climbers ihe niile ha kwesịrị ịma iji lanarị n'ebe dị elu nke Himalaya. Ma ọ bụ na n'ọtụtụ dị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-adaba na nrụgide nke ikuku ma ha na-ewepụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike iji nwee ike ịrịgo.
A mụrụ Sherpas na ebe ndị a n'ihi ya, ha nwere usoro mmegharị nke ọtụtụ afọ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Ndi Himalaya bukwa ndi okpukpe no n’akuku ugwu niile. Ọ bụghị nanị na otu okpukpe na-achị na saịtị ndị a, mana ndị Hindu, ndị Jain, ndị Buddha, na ndị Sikh na-eme emume ha.
Mkpokọta ogologo nke Himalayas dị kilomita 2400 n'ogologo ma na-aga site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ nke Osimiri Indus. Ọ gafere mba niile dị n'etiti ọwụwa anyanwụ nke Eshia wee kwụsị na Brahmaputra. Obosara ya kachasị bụ 260 km.
N'ịbụ ugwu nke akụkụ ndị a, ọtụtụ osimiri na-asọ site na mmiri dị mma sitere na agbaze mmiri glaciers. I nwekwara ike ịnụ ụtọ ndagwurugwu ndị mara mma dị na U site na mbuba nke ice. Usoro ndị a dị na mbara ala na-atọ ụtọ ma dịkwa mkpa ịhụ mmadụ. Isi iyi ndị na-asọ site na Himalaya bụ ndị Ganges, Indo, Yarlung Tsangpo, Yellow, Mekong, Nujiang na Brahmaputra. Osimiri ndị a nile nwere oke iyi ma bụrụkwa ndị ama ama maka mmiri okike na mmiri ha. Ha nwere ikike ịchịkwa ihu igwe nke ụwa ma buru ọtụtụ mmiri na-asọba na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Mmiri ndị a na-ejikarị ihe okike dị ukwuu bara ụba na nri.
Olee otú e si kee ugwu ugwu Himalaya?
Ka usoro ugwu a wee nwee otu akụkụ ga-etolite, a ga-enwerịrị usoro usoro mbara igwe nke na-adị ukwuu na mbara ụwa. E guzobere ugwu ugwu Himalaya n'ihi nkwekọrịta nke efere Indic na Eurasia. Efere kọntinent abụọ a jikọtara onwe ha nnukwu ike wee mepụta usoro ugwu niile anyị na-ahụ taa. E jiri ya tụnyere nnukwu ugwu ndị ọzọ dị na mbara ụwa anyị, ndị Himalaya dị obere. Ekwuru m na ọ dị obere n'ihi na na mmadụ, ọ bụ agadi, mana ka anyị ghara ichefu geological oge.
Otu n’ime ihe mere eji amata ha dị ka ndị na - atụtụ aka n’oge a bụ n’ihi na anaghị eyi ha ọ bụla. Mgbe ugwu toro, ọ bụ ihe ngosi na elu ahụ na-emebi emebi mgbe usoro ọdịda, snow, mmiri ozuzo na ifufe na-aga n'ihu. Usoro nke ejiri kpụọ ya aghọtabeghị nke ọma, mana ejiri ya tụnyere Alps iji gbalịa chọpụta afọ ya. Ndị ọkà mmụta sayensị eguzobewo na, mgbe kọntinent abụọ ahụ jikọtara ọnụ, eriri ụwa ji nwayọọ nwayọọ too ọtụtụ nde afọ.
Mgbe ihe omumu banyere ala na ihe omumu banyere mpaghara di na mpaghara emeputara na mmalite nke nguzo ugwu a bidoro nde iri ise na ise gara aga. N'oge a bụ mgbe efere abụọ malitere ikukpọ. Usoro a agwụbeghị taa. Nke a bụ ihe kpatara enwere ọtụtụ ala ọma jijiji na mpaghara ahụ. N'ihi nke a, a sịrị na Himalaya bụ nwata, ebe ugwu ya na-eto taa. Ọ dịghị usoro usoro mbara igwe nke dị ngwa ngwa, a na-eme atụmatụ na ọ ga-agwụcha na-eto n'ime afọ 60.
Osisi na osisi nke Himalayan
Dịka anyị kwurula na mbụ, gburugburu ebe obibi a jupụtara n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ahịhịa na ahịhịa. E nwere ụdị dịgasị iche iche na ụdị ala dị iche iche dabere na ihu igwe kacha nso. Iji maa atụ, anyị na-ahụ oke oke ohia, okpuru mmiri na ala ahịhịa dị ka ala ugwu. Ka anyị na-arị elu, anyị na-ahụ ebe ọ bụ naanị ice na snow.
World Wide Fund for Nature (WWF) amụọla nke ọma banyere ụdị niile ma mepụta ndepụta nke ọ na-egosi na ha na-ebikọ ọnụ. Anụmanụ 200, ihe karịrị ụdị osisi 10.000 na ụdị nnụnụ 977. Nke a bụ akụnụba nke a ga-eji kpọrọ ihe, n'ihi na taa enwere ebe ole na ole nwere ụdị dị iche iche nke ahịhịa na ahịhịa.
Enwere m olileanya na ozi a ga-enyere gị aka ịmatakwu banyere ugwu ugwu kachasị ama n'ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ndị Himalaya
Ọnye na -bụ Ricardo Ledesma? dijo
Obere ma kọwaa nke ọma. Odi itunanya.M na-ekele gi maka ikesa.
Zaghachi Ricardo Ledesma
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị na ịgụ akwụkwọ Ricardo!